पत्रकारले नै गरे ज्ञानेन्द्रमाथि हातपात ! योगेश विरुद्ध बोल्दा पक्रिए फेरि ज्ञानेन्द्र शाही - Charchit Entertainment!
Home bjob fnews पत्रकारले नै गरे ज्ञानेन्द्रमाथि हातपात ! योगेश विरुद्ध बोल्दा पक्रिए फेरि ज्ञानेन्द्र शाही
Charchit Entertainment September 15, 2019 bjob, fnews,
पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई जहाजभित्रै थर्काउने ज्ञानेन्द्र शाही पुनः पक्राउ परेका छन् । कुपण्डोलस्थित नेपालीका लागि नेपाली अभियानको कार्यालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनबाटै उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको बताइएको छ ।
शनिवार नेपालगञ्ज एयरपोर्टमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईका कारण १ घण्टा प्लेन डिले भएको भन्दै शाहीले जहाजभित्रै मन्त्रीलाई झपारेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । उक्त घटनाका बारेमा मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट पार्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पनि लेखेका थिए । आफ्नो स्टाटसमा मन्त्री भट्टराईले आफ्ना कारणले १५ मिनेट मात्रै प्लेन डिले भएको प्रष्ट पार्दै त्यही १५ मिनेट ढिला भए पनि त्यसका लागि माफी मागेका थिए । तर, ज्ञानेन्द्र शाहीले भने आफूसँग ६ः१५ को टिकट रहेको र जहाज ७ः१५ मा उडेको बताउँदै मन्त्रीले ठाडै ढाँटेको दावी गरेर भिडियो लाइभ दिएका थिए । साथै त्यसबारे प्रष्ट पार्ने र वोर्डिङ पास सार्वजनिक गर्ने भन्दै शाहीले कुपण्डोलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना पनि गरेका थिए ।
तर, उनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन उनकै लागि प्रत्युत्पादक भयो । पत्रकार सम्मेलनमा उनीमाथि आक्रोशित पारामा प्रश्नहरु सोधिए । प्रश्नहरु सोध्दै अन्ततः पत्रकार सम्मेलनमा हातहालाहाल नै भयो । पत्रकार सम्मेलन नै विथोलिएको केहीबेरमै शाहीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोध्नेहरु कोही आफूलाई विद्यार्थी बताइरहेका थिए भने कोही आफू पत्रकार भएको बताइरहेका थिए । उनीहरुले ज्ञानेन्द्रले जुम्लामा एसएलसी उत्तीर्ण गर्न नसकेको, पछि चाटर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्न दिल्लीमा गएको तर त्यहाँ नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको, उनले नाम नै ढाँटेको भन्ने जस्ता प्रश्न सोधिरहेका थिए । प्रश्न गर्दै मञ्चतिर विस्तारै च्यापिदै गएका युवाले अन्ततः ज्ञानेन्द्र बसेको टेबुलमै पुगेर हातपात गरेका थिए । प्रश्न सोध्नेहरु आक्रोशित भएपछि ज्ञानेन्द्रले पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारले मात्रै प्रश्न सोध्न भन्दै तपाई कुन मिडियाबाट हो भनेर उल्टै प्रश्न गरेका थिए । तर, प्रश्न सोध्नेले आफू विद्यार्थी भएको भन्दै तपाईलाई हामीले प्रश्न सोध्न नपाउने भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरेका थिए ।
ज्ञानेन्द्र शाहीले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुअघि प्रहरी उनको कार्यालयमा पुगेको थियो । प्रहरी पुगेपछि ज्ञानेन्द्र शाही भिडियो लाइभ गर्न सुरु गरेका थिए । भिडियो लाइभमा उनले प्रहरी इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा युनिफर्मसहित गएको प्रहरी कार्यालयमा प्रवेश गर्न लागेको जानकारी गराएका थिए । साथै ज्ञानेन्द्रले प्रहरीलाई भित्र छिर्न नदिन र पत्रकारहरु छिटो बोलाउन भन्दै आफ्ना सहकर्मीहरुलाई भनिरहेका थिए । त्यसपछि आफ्ना नेता तथा बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेलाई फोन गरेर बोलाउन लगाएका थिए । न्यौपाने आउनु अघि नै कार्यालयको हलमा पुगेर पत्रकार सम्मेलन सुरु गरेका शाही सुरुमा निकै आक्रोशित थिए । तर, पत्रकार भनेर बोलाएकाहरु सबै उनकै विरुद्ध खनिएपछि उनलाई हम्मेहम्मे परेको थियो ।
प्रश्न गर्ने केही युवाले शाहीलाई ‘झुट र ढोंगी’ भनेका थिए । ‘तपाईं नाम पनि ढाँट्ने, पढाइ पनि ढाँट्ने ? तपाईं एसएलसी फेल हो कि होइन ?’ भन्दै प्रश्न गरिएका थिए । शाहीले उत्तर दिए पनि उनको कुरै नसुनी उनीमाथि एकोहोरो प्रश्न तेर्स्याएका थिए । त्यसपछि आफूलाई विद्यार्थी भन्ने केही युवाले शाहीमाथि हातपात गरेका थिए । ज्ञानबहादुर शाही वास्तविक नाम भएको भए पनि उनले आफ्नो नाम ज्ञानेन्द्र किन भनेको भनेर प्रश्न सोध्ने युवाहरुलाई ज्ञानेन्द्रले त्यसो भए प्रचण्ड नाम किन राखियो त भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रश्नसोध्ने युवाले लगत्तै म के प्रचण्डको छोरो हो र प्रचण्ड को हो भनेर प्रश्न गर्ने भन्दै उत्तेजित भएका थिए ।
पत्रकारका रुपमा पुगेका युवाहरु आक्रोशित भएर स्थिति उत्तेजित भएपछि ढोका थुनेर भित्र पस्न नदिइएका प्रहरीलाई पछि भित्र पसाइएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले उनलाई गिरफ्तार गरेको हो ।
By Charchit Entertainment at September 15, 2019